Soo Iibso Cute Patchwork Cute Sleeveless Pearl Tulle Gabdhaha Tutu Dharka - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
Putework Cute gacmo furan Pearl Tulle Gabdhaha Tutu Dharka
$ 24.99 qiimaha joogtada ah $ 36.99
Qadarka Kidaanka 5-6Y 7-8Y 6-7Y 6-12M 12-24M 2-3Y 3-4Y 4-5Y
Putework Cute gacmo furan Pearl Tulle Gabdhaha Tutu Dharka - 5-6Y gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nambarka Tusaalaha: 491231
Fiiro gaar ah: Halkan waxaa ku jira kala duwanaansho 2-3% marka loo eego cabirka gacanta. Fadlan si taxaddar leh u hubi shaxda cabbirka ka hor intaadan iibsan shayga. Fadlan la soco in kala duwanaanta midab yar ay tahay in la aqbali karo iftiinka iyo shaashadda darteed. 1 inji = 2.54 cm
Tani waa bambo qiimahan oo kale ah! Dhar sidan oo kale u wacan, tolliintu waa xitaa, kuulku waa ku wanaagsan yahay in la qabto, waxaan toli doonaa qaanso had iyo jeer isku meel ku ahaan doonta. Dhab ahaan waan kugula talinayaa!
Maraakiib deg deg ah oo qurux badan laba toddobaad ayaa loo dirayaa Poland
Badeecadaha la helay usbuuc ka dib oo leh dabada (ayaa la weydiistay inay soo diraan dhaqsaha badan, maadaama ay ahayd lagama maarmaan in la dabaaldego). Dharka ayaa si fudud u fiican, qurux badan oo aan cillad lahayn. Waxaan kula talin
Dhar qurux badan, jilicsan, jiinyeer leh ty withy waxay la timaaddaa dhibaato la'aan. Maraakiibta degdega ah Ku talin
Dhar aad u qabow oo qurux badan !!! Gaarsiinta degdega ah ee Ukraine, 10 maalmood gudahood! Tayo wanaagsan! Muddo sanad ah ilmo dhererkiisu yahay 75 cm. Waxaan qaatay cabbirka 90 cm. Wax walba waa hagaagsan yihiin!